Zvese zvaunoda kuti uzive nezve kupisa kupisa | Green Renewables
Chokwadi iwe wakambofunga nezve mabatsiro ekubatsira kusimudzira kupisa kwemba kweimba yako pasina kuita chero mabasa. Izvo zvakakosha kuti uchengetedze madziro akasungirirwa zvakanaka kuti igadzirise tembiricha uye simba zvatinoshandisa mumhepo inotonhorera yemba. Kune aya mhando yemamiriro, akagadzirwa pendi yekupisa. Iyo yakakura hunyanzvi hunyanzvi hunotibatsira kuti tiwedzere kuputira munzvimbo yepamusoro nekuda kweayo zvivakwa.
Kana iwe uchida kuziva zvese zvivakwa uye mashandiro ekupisa anoshanda, ramba uchiverenga 🙂
1 Thermal pendi maitiro
2 Dzakakosha dzimba
3 Iyo ingashandiswa kupi?
4 Iyo pendi yekupisa inoshanda sei?
5 Zvinodhura zvakadini?
Thermal pendi maitiro
Icho chinoshanduka chinhu munyika yekudzivirira uye kuchengetedza simba. Pasina kuchinja mhando yezvinhu izvo rusvingo rwakagadzirwa, tinogona kuwedzera kuputira. Imba yakadzivirirwa zvakanaka inogona kutibatsira kuzvidzivirira kubva pakuchinja kwetembiricha pakati peimba nekunze. Nenzira iyi hatitamburi nechando chinotonhora kana kupisa kwakanyanya muzhizha. Inoshandiswa kuchengetedza tembiricha yakasimba mumba.
Uye zvakare, inofanirwa kutariswa kuti ne kuputira kwakanaka kwemadziro nemahwindo kuchaponesa simba. Kana kuchitonhora zvakanyanya kana kupisa zvakanyanya tinoshandisa midziyo yemagetsi senge kudziyisa uye kutonhodza mhepo. Ose ari maviri anowedzera zvakanyanya kushandiswa kwemagetsi mumba. Kwete chete isu tichave tichichengetedza pane yemagetsi bhiri nepisheni inopisa, asi isu zvakare tichaderedza kusvibiswa.
Mukugadzirwa tinowana zvedongo microspheres iyo inoshanda nekugadzira iyo yemukati kamuri. Iyi kamuri yemhepo inoitisa kutyora iwo aripo mafiriji uye anotibatsira kuzviparadzanisa kubva kunze. Kunyangwe iro iro pendi rependi rinowanzo chena, rinogona kuzopendwa neimwe dura rependi yakajairika pamusoro isinga tsve.
Zvinokurudzirwa zvikuru kuti usvike kunyorera 2-3 majasi ependi yekupisa yekudzivirira kwakanaka zvachose. Kana tikapenda mune rimwe ruvara kana neimwe pende yekushongedza, hatizorasikirwe nemidziyo. Izvi zvinoita kuti ive yakanaka uye inochinja chigadzirwa pamusika.
Kune dzose mhuri idzo dzimba dzadzo dzisina kunyatso dzivirirwa, ichi chinhu ruoko rwe musande. Izvo zvivakwa zvacho zvinoshamisa uye kushanda kwayo kunovimbiswa. Nekuparadzirwa kwakanaka kwepuru yekupisa pamadziro eimba, tinogona kubudirira kuchengetedza kusvika makumi mana muzana mumhepo inotonhorera uye kupisa.
Kune rimwe divi, ine zvivakwa zvinodzivirira kuoneka kwehunyoro. Zvakajairika kuwana hunyoro mumadziro akare nekuda kwekufamba kwepombi. Nekudaro, iyi pendi inodzivirira kugwamba kwemvura pamadziro, uye nekudaro hunyoro hauoneke.
Iyo zvakare ine anti-chakuvhuvhu zvivakwa, saka hatizove nematambudziko nefungus uye hutachiona. Iyi ficha ine hukama neiyo yapfuura. Fungi nebhakitiriya zvinoda nzvimbo ine hunyoro kuti igare. Naizvozvo, nokusatendera hunyoro kuumba pamadziro, hatizove nematambudziko erudzi urwu.
Chekupedzisira, iyi pendi ine yakakosha maitiro e uve murazvo unodzora. Hazvina basa kana tichiisa moto pairi nekukanganisa kana paine tsaona yemumba. Thermal pendi haizotsva pasi pechero mamiriro.
Iyo ingashandiswa kupi?
Iyo pendi yezvakatipoteredza iyo inotibatsira kuwedzera kuputira kweimba yedu pasina kudzikisa nzvimbo yekugara. Uye zvakare, patinoishandisa isu tinowanawo kuderera kweruzha rwekunze.
Thermal pendi chigadzirwa chakasiyana-siyana. Iwe haufanire kuve nyanzvi mune ino nyika kuti ugone kuishandisa pane chero pamusoro. Basa rairi kuita rakakosha kwazvo muzvivakwa kudzikisira mari pakupisa nemhepo inodziya. Inogona kuiswa mukati meimba nekunze kuti uwedzere kuwedzera mhedzisiro yako.
Iyi pendi iri zvakare mukukwirira kwakanyanya kune ese marudzi emaindasitiri uye ekuchengetedza ekushandisa. Izvi zvinokonzerwa nekupokana kwazvo nekupisa, hunyoro, moto uye kusagadzikana kwayo. Munzvimbo dzemabhizimusi zvakajairika kuona madziro ari muhurombo nekuda kwezviitiko zvinoitika. Nekudaro, neiyi pendi, yakanaka yekushongedza uye inobatsira mamiriro emadziro anogona kuchengetedzwa. Yakave zvakare yakashandiswa pamusoro pematenga edenga uye pamatenga edzimba dzakasiyana.
Iyo pendi yekupisa inoshanda sei?
Uyu mubvunzo watinoramba tichizvibvunza isu. Ko jasi repende rinogona kubatsira sei kupisa kunze kana kutonhora kupinda mumba? Kana nyangwe madziro eimba haanyatsoshanda. Iyi pendi, mushure mekushandisa kwayo uye kuomesa, ine ma microspheres akaumbanidzwa akarongeka mumativi akati wandei. Aya marara anoita imba yemhepo inotyora iro bhurandi rekushisa.
Kana isu tikawedzera zvinopesana zvezvinhu zvedongo, tinogona kutaura kuti chakati wandei chiitiko chezuva mwaranzi pane pendi pevhu "inobhururuka". Nenzira iyi, kufambiswa kwekupisa pakati pekunze kweimba nemukati zvakaderedzwa. Iyo inokwanisa kuramba kumusoro 90% yemwaranzi yezuva inonzi infrared uye inosvika 85% radiation.
Mumakambani akasiyana anotengesa chigadzirwa ichi, bvunzo dzakaitwa kuyera kupisa kwekupisa kwemapendi. Maitiro akawanikwa kutenderera 0,05 W / m K. Aya maitiro akave akawanikwa nemamwe echinyakare ekudzivirira zvinhu zvakadai semaminerari mvere kana kuwedzerwa polystyrene. Izvi zvinoratidza kushanda kukuru kwependi yekupisa seyakavhara.
Chii chinoita kuti chiwedzere kunyanya kukosha ndechekuti inoshanda nenzira inotungamira. Izvi zvinoreva kuti inokwanisa kuratidza kupisa kunobva kumativi ese epasi pevhu. Muzhizha zvinotibatsira kumisa kupisa kupinda kubva kunze uye munguva yechando kunozvichengeta.
Tinouya kumubvunzo wauchange uchibvunza mushure mekuona kushanda kwawo kukuru. Mutengo werita rependi iyi wakakomberedza 25 euros. Zvinoenderana nemugadziri uye neruvara. Ichena ndiyo yakachipa kwazvo, nekuti inogona kupendwa mune rimwe ruvara gare gare. Kufunga kuti iwe unayo goho rinofungidzirwa re0,8 uye 1,0 litita pamamita mita uye iyo yekushandisa kwayo inowanzo nyungudika ne10% neuwandu hwemvura, ingangoita maEur 700 anogona kuverengerwa kurapa 10 x 3 m madziro.
Kuti uwane izvi kufukidzwa, maviri kana matatu majasi ane roller kazhinji anodikanwa.
Sezvauri kuona, ichi chigadzirwa chine mutengo wakakwira, asi mashandiro uye huchokwadi hunovimbiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Thermal kupenda